गायनमा सक्रिय बन्दै गायिकाः नित्याशिवा - Kanchanjangha Online
कञ्चनजंघा अनलाईन ६ पुष २०७५, शुक्रबार ०२:०४ मा प्रकाशित ( २ साल अघि) ४१७ पाठक संख्या
सुनसरीको प्रकाशपुर जन्मथलो भएपनि कर्मथलो काठमाडौँलामई बनाएर नेपाली सांगीतक आकाशमा राम्रो सम्भावना भएकी गायिका हुन नित्याशिवा । आफ्नो पहिलो एल्बम चाहना मनको गीतबाट नेपाली संगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी उनले हाल सम्म चलचित्र तथा पार्श गायनको क्षेत्रमा बर्चस्व राख्न सफल भएकी छन । उनले बिधवा ,रथ,गोरे,दिलदार, कन्फ्युज,मदहोस आरोप र इ कैसन बौछा र भोजपुरी मुभी मा आवाज दि सकेकी छन भने थुप्रै भोजपुरी गीत र नेपाली गीत हरु गाएकी छन हालै तिमी ट्याटु खोपन बाट आम दर्शक तथा स्रोताको मन मुटुमा बस्न सफल भएकी छन । तिनै गायिका नित्याशिवा सगँ सहकर्मी साथी रोशन पोखरेलले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश ।
– तपाईको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो ?
– साँगितिक क्षेत्रमा कसरी प्रवेश कसरी भयो ?
म यो क्षेत्रमा सानैदेखि लागेकी हुँ जति बेला म ५-६ कक्षामा पढ्थे होला त्यस बेला म टेबल ठटाएर गीत गाउँथे । पछि काठमान्डौँ आएपनि संगीत प्रतिको मोहले तान्यो र संगीतको क्लास गर्न लागे । जसको केही समय पछि मैले “चाहना ” बोलको गीत बजारमा ल्याए । पहिलो एल्बम भएर होला खासै गीतले सफलता दिएन । त्यसपछि मैले विधवा गीतमा आफनो आवाज दिए । जुन गीतलाई धेरैले मन पराउनुभयो । जसको सफलताबाट आज सम्मपनि संगीतको क्षेत्रमा रहेकी छु ।
– संगीतिक क्षेत्रको व्यवसायिक अवस्था कस्तो छ ?
– गीत संगितमा नलागेको भए नित्या शिवा लाई कहाँ भेटिन्थ्यो होला ?
– यहाँलाई नित्या शिवा भनेर चिनाउने गीत कुन कुन हो ?
– यस क्षेत्रमा स्थापित हुनका लागि यहाँले कतिको दुख र शंघर्ष गर्नु पर्यो ?
– कलाकार त राष्ट्रको गहना भन्छन्क नि , कला क्षेत्रमा लागिसके पछी आफ्नै गाउँ ठाउँ र देशको लागि के गरे जस्तो लाग्छ ?
– यस क्षेत्रमा स्थापित हुनमा सबै भन्दा पहिला कसको नाम सम्झिनु हुन्छ ?
धन्यवाद हामीलाई समय दिनु भएकोमा । धन्यवाद रोशन जी , तपाईले मेरो जिन्दगीका तिता मिठा भोगाइहरु हजुर मार्फत धेरै शुभचिन्तक मेरा श्रोता तथा दर्शक माझ पुर्याउने अवसर दिनुभयो । त्यसका लागी तपाई हृदय देखी नै आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
गायिका मन्जु पौडेल आफै हिरोईन बन्दै !खोलिन अन्तर्वार्तामा गोप्य कुराहरु (हेर्नुहोस)
रचना र भुषणको ‘ह्यापी न्यु यर’ सार्वजनिक ( भिडियो )
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार ०६:४८
छायांकनरत फिल्म ‘अभियान’को क्लाईमेक्स तस्वीर तथा भिडियो सार्बजनिक
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार ०६:३८